Sii Fiisooyinka elektaroonigga ah ee Dal-ku-galka ee Hindiya Hadda waxay Dardar Gelinayaan Hoggaamiyihii Hore ee IATO
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Sii Fiisooyinka elektaroonigga ah ee Dal-ku-galka ee Hindiya Hadda waxay Dardar Gelinayaan Hoggaamiyihii Hore ee IATO
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Faallo • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Fiisooyinka elektaroonigga ah
Hogaamiyaha Socdaalka iyo Dalxiiska Subhash Goyal, Gudoomiyaha kooxda STIC iyo Madaxweynihii hore ee Ururka Iskaashatooyinka Dalxiiska ee IATO (Indian Association of Tour Operators (IATO)), wuxuu leeyahay wadanku wuxuu ubaahan yahay inuu si dhaqso leh ubilaabo ogolaanshaha Fiisooyinka elektaroonigga ah ee Hindiya iyo duulimaadyada caalamiga ah ee bilaha Sebtembar iyo Oktoobar si loo bilaabo dib u soo celinta waaxda.
COVID way sii joogi doontaa, waana inaan baranno sida loola noolaado, ayuu yidhi Goyal.
Inta badan dalxiisayaasha Hindiya waxay yimaadaan inta udhaxeysa Oktoobar iyo Maarso, sidaa darteed, xilligan soo socda waa muhiim.
Kumanaan wakiilo safar iyo hawlwadeenno dalxiis ah ayaa durba musalafay. Rajada kaliya ee badbaada waa bilowga fiisooyinka elektaroonigga ah iyo duulimaadyada caalamiga ah ee la qorsheeyay.
Goyal oo sii hadlaya ayaa yiri:
Waa inaan fulinaa riyadeena raiisulwasaaraha oo ahayd in Hindiya laga dhigo 5 tirilyan oo doolar dhaqaale. Dalxiiska ayaa ah warshadaha kaliya ee xoog badan isla markaana saameyn badan ku leh dhaqaalaha. Sidaa darteed, waxaan u baahannahay inaan hadda wax ka qabanno intaan goori goor tahay.
Xilliga dalxiiska ee Hindiya waa laga bilaabo Oktoobar ilaa Maarso oo waxaan ubaahanahay inaanan luminin fursadan sanadka 2021 ilaa sanadkii 2020 wuxuu ahaa wadar dhiqis.
Sanadkii 2019, Hindiya waxay kasbatay Rs.2,10,981 crores Dibedda Dibadda laga bilaabo muddadii Jannaayo illaa Disembar ama US $ 3.1 bilyan bishii Diseembar 2019 (isha MOT). Waddanku wuxuu qaabilay in ka badan 10 milyan oo dalxiisayaal ah sannadka 2019.
Dalxiiska caalamiga ah wuxuu kudhowaad 10 boqolkiiba GDP-ga India iyo qiyaastii 11 boqolkiiba canshuuraha tooska iyo kuwa aan tooska ahayn. Martigelinta iyo warshadaha dalxiiska waxaa ka shaqeeya qiyaastii 58 milyan oo qof si toos ah iyo ilaa 75 milyan oo dad ah oo si dadban ugu sugan Hindiya. Qiyaastii 10 milyan oo qof ayaa lumiyay shaqadooda ama waxay ku jiraan fasax mushahar la'aan.